Shir aad u balaadhan oo ay jaaliyada SSH ee UK ku qabteen magaalada London.
Garaad Abshir Saalax oo shirka warbixin siinaya.
London: Waxaa maalmahan ka socdey magaalada London shir ay isugu yimaadeen jaaliyada Sool,Sanaag iyo Hawd ee cariga Ingiriiska,shirkaas oo si rasmi ah u furmay maalintii sabtigii 15/02/2003 ayaa waxa ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo isugu jira Garaado,siyaasiyiin,iyo waxgarad kale oo ka kala yimid meelo ka baxsan UK.
Waxaa shirka laga dareemyey xiisaha loo qabo,iyadoo dadka qaar ay ka yimaadeen meelo aad uga duragsan magaalada London,ayaa waxa ay indhuhu soo jeedidaayeen sida loo qurxiyey hoolka shirka,cuntada lagu fara yarastay ee hablaha reer London soo diyaariyeen,iyagoo weliba habluhu qayb libaax ka qaateen hawlaha shirka,iyagoo halkaas ku soo bandhigay maawelo isugu jirta buraanburo qiiro galiyey ka soo qabgalayaashii shirka iyo warbixin ku saabsan hawlaha samafal ee qabtaan.
Shirkaas oo lagaga hadlayey arimo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin arimaha xaga nabad gelyada,xaga caafimaadka,iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa shirweynaha lagu balansan yahay inuu bisha April ee sandkan uu ka dhaco magaalada Laascaanood.
Qaar ka mid ah ka qayb galayaasha shirka,Cabdi Dhiboo,Garaad Abshir,Falaalug.
Shirkaas oo ahaa shir si weyn loo soo abuubulay ayaa waxa ugu horeyn warbixin soo jeediyey Gudoomiyaha shirka Axmed Saleebaan Sancad oo ka warbixiyey meesha ay marayaan hawlaha jaaliyada UK,isagoo halkaas ku qaybiyey waraaqihii xubinimada jaaliyada SSH ee UK,wuxuuna ku booriyey dhamaan xubnaha jaaliyada inay gutaan hawsha looga baahan yahay.
Waxaa kaloo isna halkaas ka hadlay Garaad Abshir Saalax oo ka mid ah garaada beesha Dhulbahante oo isaguna halkaas ka jeediyey warbixin ku saabsan xaalada siyaasadeed ee wadankii iyo waxa la gudboon jaaliyadaha SSH inay qabtaan,waxa kale oo uu garaadku soo gaadhsiiyey golaha fariin uu taleefoonka ugu soo gudbiyey Mudane Maxamed Faarax Ciise Gaashaan oo ah siyaasi si weyn loo qadariyo.
Waxaa kaloo xiriir lala sameeyey gudoomiyaha waxbarashada ee SSH mudane Maxamed Buraale Ismaaciil,iyadoo la filayey in uu si toos ula soo xidhoodho golaha ayaa cilad farsamo awgeeg,fariintiisii oo qoraal ah laga akhriyey madasha shirka,isagoo Mr Buraale ku booriyey dhamaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka beeshu inay u istaagaan sidii loo dar dar gelin lahaa hawlaha qabyada ah.
Ka qayb galayaasha shirka